Sida Loo-shaqeeyuhu u shaqeeyo - Gofumed
Oktoobar, 2010 Cartografia
Waqtigii hore waxaan ka wada hadalnay shuruudaha qaarkood MapServer iyo aasaaska aasaasiga ah. Haatan waxan aragnaa qaar ka mid ah hawlgalkooda jimicsiga khariidadaha Chiapaneco.
Meesha ay ku xirantahay
Marka Apache la rakibo, buugga daabacaadda ee loogu talagalay MapServer waa liiska OSGeo4W si toos ah kor ku xusan C:
Gudaha, waxaa jira faylal kala duwan oo leh codsiyada iyadoo ku xiran waxa la rakibay, laakiin faylka loogu talagalay daabacaadu waa inuu galaa gudaha Apache. Xaaladdan oo kale waxaa loo yaqaan gis.
Ka dib gudaha, faylka xogta waxaa ku jira layers, orthophoto, iwm.
Faylka iwm, waxaa jira faylalka dhabta ah ee loo isticmaalo calaamadaha, iyadoo la dheereeyey. Sidoo kale halkan waa file fayl ah oo kicinaysa iyaga iyo mid kale oo qeexaya calaamadaha.
Ugu dambeyntii faylka httdocs waxaad gashaa bogagga internetka ee kor u qaada adeega.
Tusaale ahaan, waxaan isticmaali doonaa kiiska lagu tusay wakhti hore. Asal ahaan waxaa ku jira faylka xisaabinta ee u wareegaya mid ka mid ah fidinta phtml, taasina waxay kor u qaadeysaa shaqooyinka lagu dhejiyey php iyo khariidadaha. Faylka wuxuu ka kooban yahay sawirrada la xidhiidha bogga.
Haddii aan eegno, phtml waa kaliya qolofka laga dhisay miisaska, oo loo yaqaan 'mapscript / php'. Waa inaad kor u kacdaa adoo isticmaalaya:
Natiijada waxaa lagu muujiyay hoos:
xaruntii shaqada GMapDrawMap (),
dhinaca midigta wac GMapDrawKeyMap keymap keymap (),
qiyaasta miisaanka hoose GMAPDrawScaleBar (),
iyo haddii ay dhacdo hawlaha hawlgalka, xaalad la xiriirta liiska haddii (! IsHtmlMode ()) echo "<! -" iyada oo go'aanada: ZOOM_IN, ZOOM_OUT, RECENTER, QUERY_POINT.
Horay u orodka, bandhiggu sidan ayuu u egyahay:
Isku daridda daabacaadda sawir-gacmeedku waxa ay ku jirtaa waxa kor u kaca Apache, oo u diraya php khariidadaha ka dibna waxa ay u socotaa qolkaas. Laakiin badankooda sayniska waxay ku jiraan faylasha .map, taas oo aan lagu jahwareersaneyn kuwa ka soo jiiday Mapinfo, Manifold ama Mobile Maabka Office iyadoo la kordhinayo.
Kuwani .map waa faylasha qoraalka, kuwaas oo ku jira khariidada qaab qoraal ah. Kuwani waxaa lagu abuuri karaa barnaamijyada macaamiisha sida Quantum GIS, haddii ay ku jiraan waxaa jira mid ka mid ah khariidada ugu muhiimsan, mid ka mid ah Keymap iyo laba loogu talagalay adeegga OGC iyo adeegga wfs. Aan aragno sida ay u shaqeynayaan khariidadaha:
Xaaladda joogtada ah
SIDE 600 450
XIDHIIDHA 604299 1933386 610503 1939300 # WARBIXIN KU SAABSAN DHAQAALKA PALENKU
XIDHIIDHA 605786 1935102 608000 1938800 # SOLO 01 SECTOR
MAP waxay muujinaysaa in qoraalka bilaabmayo
STATUS, waxay muujineysaa haddii khariidada ku-meel-gaadhka ah ay ku taal ama ayan ahayn
SIZE waa cabbirka bandhigga
SYMBOLSET waxay muujinaysaa waddada calaamadaha
MACAAFADO waa isku-duubnaanta bandhigga. Astaanta # ayaa loo isticmaalaa in la sameeyo faafaahin
UNITS ee unugyada
SHAPEPATH, wadada meesha lakabtu tahay
Dhamaan dhammaadka dhammaadka waxay ku dhammaan doonaan amarka END
Gudaha, koodhku wuxuu ka bilaabmaa xariiq talis ah, wuxuuna ku dhamaanayaa END, tusaale ahaan qiyaasta ugu yar iyo kan ugu sarreeya; tusmooyinka sawirada ku meel gaarka ah:
SIDE 300 5
DULSHOOYINKA 0 0 0
Lakabka raajada: taas oo ka mid ah maalgelinta, oo sharaxaad ka ah liiska sida "Ortofoto", laga bilaabo khariidad ku taal faylka xogta:
Lakabka shp-ga ee geesaha, oo ku saleysan shuruudaha, kordhinta xog qaar ka mid ah html html, oo leh calaamadda font sans, size 6, midabka madow iyo geesaha cad ee 5 bakhshi ...
XADIISKA 607852 1935706 610804 1938807 METADATA
"DESCRIPTION" "Qodobbada Qiimeeyaha 02"
"RESULT_FIELDS" "MsLink Cve_Mz Cve_Pred Xuddunta Gawaarida Goobta"
WAXYAABAHA LAGA HELAYO PIXELS
XADGUDUB ([VALUE] = 0)
FONT ayaa soo saartay
END #class qiimaha 0
#COLOR-1-1-1 # FURSHA
... iyo wixii la mid ah ilaa inta la xirayo
DHAMAAD # Qiime ah
Si loo dhamaystiro
Sidaa awgeed, si ay ula shaqeeyaan MapServer, inkastoo ay tahay wax aad u sahlan, waxa uu noqonayaa hab adag oo aad u yar shaqooyin weyn maxaa yeelay, wax walba waa in .map ah. Faa'iida ugu weyn waa in wax walba la sameeyaa on cagta, sida qeexidda midab kasta theming ah, oo saas daraaddeed kac qalabka sida CartoWeb, ka shaqeeya MapServer laakiin keentaa plugins dhisay iyo tusaalayaal la sifooyinka kayeel version heer hoose ah si ay u sii sida ah marka hore u akhri:
Shaqooyin kala gooni ah, oo leh AJAX si ay si gooni ah u cusbooneysiiso
Qodobka code, oo la siiyay warqad dib loo qorayo .map oo ku salaysan shuruudaha lagu xakameyn karo
Caadada dib u soo celinta barokaca iyada oo aan loo baahneyn cusbooneysiin, sida haddii ay ahayd lakab xambaarsan
Daabacaadda vector-ka ee internetka, oo si dhakhso ah u qora warqadda
Kaqaybgal dusha qaybta vector
Ku dhoofinta Google Earth
Abuur PDF-ka soo-dejinta
Marka xigta waxaan fiirin doonaa CartoWeb, halkan waxaan ka tagayaa xiriirka tusaalooyinka muhiimka ah.
Post Previous«Previous Alibre, ugu fiican ee 3D design farsamo
Post Next Juquraafi ahaan sawiro ku dhowNext »
3 Jawaab ah "Sidee ayuu u shaqeeyaa"
juan muñoz isagu wuxuu leeyahay:
Waxaa jira hab aad ku heli kartid sheyga template phtml standard, thanks
Ladymerch4 isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan isku dayayaa inaan lakulo lakab laga helo .map, sida soo socota:
Xiriirka # »virtual.ovf»
Dhibaatadayda ayaa ah in adeegga 'DSN' uu bixinayo dhibaatooyin: markii aan codsanayo HelCapabilities Waxaan soo celinayaa furaha keydka macluumaadka ... miyaan wici karaa feyl si aan uga fogaado "bixinta" erayga sirta ah mise waa qalad DSN ?? Mahadsanid!
server-ka isagu wuxuu leeyahay:
MapServer waa mashruuc caan ah oo caan ah oo ujeedkiisu yahay inuu muujiyo khariidadaha jawi firfircoon ee internetka. Qalab lagu rakibay waa darawal lagu duubay galka faaruq ah ee mugga kaasoo isticmaala nidaamka faylka NTFS. Dareemayaasha la rakibay waxay u shaqeeyaan sidii wadooyin kasta oo kale, laakiin waxaa loo xilsaaray wadiiqooyinka waddooyinka halkii ay ka qaadi lahaayeen waraaqo.